Indlela owenza ngayo imali ku-Airbnb
Nge-Airbnb, jabulela isistimi yokukhokha engenabuhlungu, amanani aphansi, nenkululeko yalokho okukhokhisayo.
Ake usithi fahla ngendawo yakho
Indlu yonkeIkameloIgumbi elabiwe
Isivakashi esingu-1Izivakashi ezingu-2Izivakashi ezingu-3Izivakashi ezingu-4Izivakashi ezingu-5Izivakashi ezingu-6Izivakashi ezingu-7Izivakashi ezingu-8Izivakashi ezingu-9Izivakashi ezingu-10Izivakashi ezingu-11Izivakashi ezingu-12Izivakashi ezingu-13Izivakashi ezingu-14Izivakashi ezingu-15Izivakashi ezingu-16
Ukukhokha okulula, okushelelayo
Khokhelwa ngendlela yakho—ngezindlela ezifana ne-Paypal, idiphozithi eqondile, noma ezinye kuye ngendawo yakho.
Faka indawo yakho mahhala
Ungakhangisa ikhaya lakho ezigidini zezivakashi ngaphandle kwemibandela—azikho izindleko zokubhalisa noma izimali zobulungu.
I-Airbnb ikhokhisa isivakashi ngasinye ngaphambi kokufika ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi ukhokhelwa ngesikhathi njalo lapho ubungaza. Awusoze waphatha imali ngokuqondile.
Khokhelwa ngemva kokungena
I-Airbnb ijwayele ukukhipha imali yakho cishe emahoreni angu-24 ngemva kokuthi isivakashi sihlelelwe ukuthi sifike ukuze kwenziwe isiqinisekiso sokuthi ukungena kuhamba kahle.
Anjani amanani ethu?
Inani lamasevisi ombungazi (ukubhukha ngakunye)
Kuhlala kumahhala ukufaka indlu
Azikho izindleko yokuphrosesa zekhadi lokuthenga ngesikweletu
Ukuvikelwa ngo-$1M ngomonakalo wendawo kufakiwe
Kugcine ukubuyekezwa ngo-June 2018
Sikwazi ukubekela eceleni okuthile okuncane okuzosiza lapho sithatha umhlalaphansi kanye nezindleko zemfundo zezingane zethu ezimbili.
UJB noRamona babungaza e-Boston ukuze benze imali ethe xaxa yokuthatha umhlalaphansi.
Inani elihle, ubusuku ngabunye
Iseluleko samanani esinokwethenjelwa
Uwena onqumayo ukuthi ukhokhisa malini. Uma ufuna usizo oluthile, sinamathuluzi afanisa amanani akho nesidingo, okuqinisekisa inani elihle ngobusuku ngabunye.
Imali eyengeziwe yamasevisi
Ungadinga imali eyengeziwe kusengaphambili yezinto ezifana nezivakashi ezengeziwe noma ukuhlanza indlu. Futhi uma ufuna ukuhlinzeka ngamanye amasevisi, njengokuqashisa ngemishini noma ukuvakasha, izivakashi zingakukhokhela lawo nge-app ngemva kokuthi zibhukhile.
Yenza ngokwezifiso izidingo zakho
Ungasetha amanani angokwezifiso ezinkathi zonyaka, izimpelaviki, nangobunye ubusuku lapho ofuna ukulawula khona lokho okukhokhisayo. Ungakwazi futhi ukunikeza izaphulelo zamaviki onke nezinyanga zonke zabantu abafuna ukuhlala isikhashana.
Kubiza malini ukufaka indawo yami?
Ukubhalisela i-Airbnb nokufaka indlu yakho kwenziwa mahhala. Lapho uthola indawo, sikukhokhisa izindleko zesevisi yakwa-Airbnb zababungazi, engu-3%, ukuze kuhlangatshezwane nezindleko zokusebenza kwebhizinisi.
Ngingazi kanjani ukuthi ngizokhokhelwa kangakanani?
Imali ozoyithola, yinani lakho lasebusuku bese kukhishwa kulo inani lamasevisi ombungazi, ngokuvamile elingu-3%. Izivakashi zikhokha imali yokusebenza kwe-Airbnb ngaphezu kwezindleko zokubhukha indlu yakho, okuyisizathu esibangela ukuba ingqikithi yenani elibonwa yisivakashi iphakame kunemali oyikhokhelwayo. Nazi izinto ezingathinta imali oyikhokhelwayo: Isaphulelo sakho samaviki onke noma isaphulelo sanyanga zonke kungenzeka ukuthi sisetshenzisiwe lapho kubhukhwa Kungenzeka kusetshenziswe inani lempelasonto noma amanani aqokiwe lapho kubhukhwa Uma kufanelelekile, intela (VAT) ingase yengezwe emalini yesevisi ye-Airbnb
I-Airbnb ingangisiza kanjani ngokubeka amanani?
Ithuluzi le-Airbnb Lendlela Yokubeka Inani likuvumela usethe amanani akho ukuthi anyeke noma ehle kuye ngezinguquko zokufunwa kwezindlu efana neyakho.
Uhlala unesibopho senani lakho, ngakho-ke Indlela Yokubeka Inani ilawulwa ngamanye amasethingi wamanani owakhethayo, futhi ungaguqula amanani obusuku ngabunye nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela Yokubeka Inani isuselwe ohlotsheni lwendlu yakho nendawo ekuyo, inkathi yonyaka, ukufunwa nezinye izici (njengezenzakalo endaweni yangakini).
Ngingalindela ukuthi ngikhokhelwe nini?
I-Airbnb ikhipha inkokhelo ngayinye cishe emahoreni angu-24 ngemva kwesikhathi esihleliwe sokungena kwesivakashi sakho. Isikhathi esithatha ukuthi imali ingene ku-akhawunti yakho sixhomeke endleleni okhetha ukhokhelwa ngayo. Uma isivakashi sakho sihlala ubusuku obungu-28 noma ngaphezulu, i-Airbnb izokunika inkokhelo yenyanga yokuqala cishe ngemva kwamahora angu-24 esikhathi esihleliwe sokungena kwesivakashi sakho. Izinkokhelo ezingeziwe zalokho kubhuka zikhishwa njalo ngenyanga. Uma ungumbungazi omusha, singase sibambe inkokhelo yakho izinsuku ezingu-30 ngemva kokuqinisekiswa kokubhukha kokuqala. Uma ukubhukha kwakho kokuqala kuqhele ngezinsuku ezingu-30, ukukhokhelwa kwakho kuzokhishwa emahoreni angu-24 ngemva kokungena okuhleliwe kwesivakashi sakho. Lokhu kuzosebenza kunoma yikuphi ukukhokhelwa okuhleliwe okuzokhishwa phakathi nalezo zinsuku ezingu-30.
Kufanele ngilikhethe kanjani inani lendlu yami?
Inani olikhokhisayo ngendlu yakho linqunywa uwena ngokuphelele. Ukukusiza uthathe isinqumo, ungasesha izindlu ezicishe zifane edolobheni lakho noma endaweni engumakhelwane ukuze uthole umbono wamanani emakethe.
Izimali Ezengeziwe • Inani lokuhlanza: Ungafaka inani lokuhlanza enanini lakho lobusuku ngabunye noma ufake inani lokuhlanza kumasethingi akho okubekwa kwamanani. • Ezinye izimali: Ukuze ukhokhise izimali ezengeziwe ngaphandle kwamanani akho (njengemali yokufika sekwedlule isikhathi noma imali yesilwane esifuywayo), kufanele udalule kuqala lezi zinkokhiso ezingaba khona ezivakashini ngaphambi kokubhukha bese usebenzisa Isikhungo Sesixazululo sethu ukuze ucele ngokuvikelekile ukukhokha kwezimali ezengeziwe.
Kuzodingeka uhlole nohulumeni wakho wasekhaya mayelana nokuthi kufanele yini izintela ziqoqwe ezivakashini noma cha. Uma unquma ukuthi udinga ukuqoqa intela, ngokuvamile ungayifaka phakathi Kwesaphulelo Esikhethekile lapho izivakashi zibhukha noma ucele izivakashi zakho ukuthi ziyikhokhe mathupha. Esimweni ngasinye, kubalulekile ukuthi izivakashi zaziswe ngenani eliqondile lentela ngaphambi kokubhukha. Uma ukhetha ukuqoqa intela ngaphandle kwezimali zendlu yakho, kufanele iqoqwe kuphela lapho kufikwa. Asikwazi ukusiza noma siqinisekise ukuqoqwa. Kwezinye izindawo, ababungazi be-Airbnb bangase babe nesici sokuqoqa nokuthumela esitholakalela ukusingatha intela yokuhlala. Ababungazi akufanele baqoqe izintela zokuhlala ngokuhlukile kulezo zindawo. Futhi, kwezinye izindawo, i-Value Added Tax (VAT) ingasebenza. Funda mayelana ne-VAT
Usukulungele ukwenza imali?